Noterena hamerina ny Apple Watch Series 3 hametraka watchOS | Avy amin'ny mac aho
Noterena hamerina ny Apple Watch Series 3 hametraka watchOS
Ny Series 3 LTE dia nanidina avy tao amin'ny akaniny, lavitra ny iPhone.
Misy ny mpampiasa mitaraina fa ny Apple Watch Series 3 dia mangataka azy ireo hamerina mba hametrahana ilay fanavaozana. Toa tsy vaovao io olana io ary hijaly ireo mpampiasa modely taloha amin'ny Apple Watch olana rehefa mametraka ny iOS 14.6.
Toa izany Misy fiantraikany mivantana amin'ny Apple Watch Series 3 ity kinova vaovaon'ny rafitra fiasa iPhone ity. Isaky ny manandrana manavao ny maodely Apple Watch Series 3 ny mpampiasa dia mahazo hafatra diso izy ireo milaza fa tsy ampy ny toerana malalaka hametrahana ilay fanavaozana ary manentana azy ireo hamerina.
Tsy fantatray raha manerantany io olana io fa raha toa misy mpampiasa marobe maromaro voakitika, ao amin'ny tranokalan'i 9To5Mac asehoy ohatra vitsivitsy navoaka tao amin'ny tambajotra sosialy Twitter. Amin'io lafiny io dia tokony handray andraikitra ny Apple. Mpampiasa voakasik'izany no nanazava tao amin'ny tranonkala malaza:
Reko hatrany amin'ireo namana manana Apple Watch Series 3 fa mahazo ny hadisoana mitovy foana izy ireo rehefa manandrana mametraka ny fanavaozana ny rafitra. WatchOS dia milaza amin'izy ireo fa tsy ampy ny toerana fitehirizana, na dia tsy manana rindrambaiko napetraka na notahirizina antoko fahatelo aza izy ireo. Araka ny filazan'ny Apple, ny vahaolana dia ny famerenana amin'ny laoniny tanteraka ny data sy ny fikirana rehetra ao amin'ny Apple Watch hametrahana ny kinova farany an'ny watchOS.
Ny tena marina dia toa tsy tsara indrindra io vahaolana io na dia mandeha aza ... Tsy maintsy tadidintsika fa na dia tsy very aza ny angon-drakitra, dia dingana mandreraka kokoa noho ny fanavaozana tsotra izao amin'ny fanindriana ny famantaranandro ary dia izay. Manantena aho fa hahita vahaolana haingana araka izay azo atao i Apple bibikely izay toa miverimberina ao amin'ny kinova sasany avy amin'ny watchOS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Noterena hamerina ny Apple Watch Series 3 hametraka watchOS
Tohizo ny fampandehanana ny tolotra amin'ny AirPods Pro